पासपोर्टको फोटोमा किन मुस्कुराउन पाइँदैन ? यस्तो छ रहस्य - Saptakoshionline
पासपोर्टको फोटोमा किन मुस्कुराउन पाइँदैन ? यस्तो छ रहस्य
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आषाढ २८, २०७५ समय: १३:५४:४७
एजेन्सी। विमानस्थलमा पासपोर्ट र आईडी फोटोलाई दिएर प्रत्येक मुलुकले आफ्नो कानुन बनाएका छन् । जस अन्तर्गत फोटो क्लियर, कपाल पछाडि लगेको र नहाँसेको फोटो चाहिन्छ । तर यस्तो किन गरिन्छ तपाइँलाई थाहा छरु केही वर्ष अघि सम्म फोटोमा चश्मा लगाउने र कपालले अनुहारलाई थोरै ढाक्ने अनुमति थियो। तर अमेरिकाको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा २६÷११ आक्रमणपछि यी सबै कुरा परिवर्तन भए । तर मुख्य कुरा पासपोर्टको फोटोमा मुस्कुराउन नपाउनुको कारण के होेरु आउनुस् यस बारेमा जानकारी लिऔं । विमानस्थलमा प्रयोग हुने बायोमेट्रिक टेक्नोलोजीले पासपोर्ट र फोटोलाई पूरै परिवर्तन गरिदिएको छ । केही देशका पासपोर्टमा चिप राखिएको हुन्छ र त्यसमा पूरा जनकारी हुन्छ। यो चिपले अनुहारको पूरै जानकारी दिन्छ । जस्तै दुई आँखाकोबीचको दूरी। नाक र ओठबीचको दूरी र मुखको चौडाई इत्यादी। यी सबै जानकारी फोटोको आधारमा हुन्छ ।
यदि तपाइँ मुस्कुराउनु भयो भने तपाइँको अनुसार सामान्य अवस्थामा रहँदैन । जसका कारण सटिक जानकारी निकाल्न संभव हुँदैन । पासपोर्टको ताजा गाइडलाइनमा चश्मा लगाएर फोटो खिचाउन, अनुहारमा कपाल झार्न र मुस्कुराउन पाइँदैन । जब तपाइँ विमानस्जलको इ–गेटबाट प्रलेश गर्नु हुन्छ, तब त्यसमा राखिएको क्यामराले तपाइँको फोटोबाट तपाइँको पहिचान गर्न सक्छ । तपाइँको पासपोर्टमा भएको फोटो र तपाइँको अनुहारको बायोमेट्रिकले मेल खायो भने तपाइँलाई सजिलै प्रवेश दिन्छ होइन भने तपाइँ अनुसन्धानको घेरामा पर्नुहुन्छ । विश्वको प्रत्येक मुलुकको पासपोर्टमा शक्ति हुन्छ । जसका कारण नै तपाइँलाई भिसा मिल्छ । ग्लोबल पासपोर्ट पावर र्यांक २०१८ का अनुसार विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुरको हो । सिंगापुर पासपोर्टधारी वश्वका १२७ मुलुकमा फ्रि भिजा जान सक्छन् । ३९ मुलुकमा भिसा अनअराइभल छ। जबकि ३२ मुलुककालागि भिसाको आवश्यक हुन्छ । यो लिस्टमा दोस्रो नम्बरमा जर्मनी, तेस्रोमा डेनमाक, स्वीडेन, फिनल्याण्ड, लक्जमबर्ग, इटली र फ्रान्स जस्ता मुलुक यो लिस्टमा पर्छन् ।
यसो गरेमा मर्न पाउदैन आत्म-विस्वास
आत्मविश्वासले मानिसमा जादुमय प्रभाव पार्न सक्छ । अध्ययनहरुका अनुसार आत्मविश्वास र सफलता तथा कार्यक्षमताबीच नजिकको सम्बन्...
इराकको मोसुलमा २५० तौल भएका आईएस आतकंकारी पक्राउ
इराकको मोसुलमा २५० तौल भएका आईएस आतकंकारी पक्राउ परेका छन् । आतंककारी समुहका शिफा अल निमा जब्बा द जिहादी लाई पक्राउ गर्...
मोबाईल फोनको असरहरु
१. राती सुत्दा मोबाइल स्वीच अफ गर्नुहोस् । सक्नुहुन्छ भने मोबाइललाई आफू सुत्ने कोठामा नै नलैजानुहोस् । सकिँदैन भने पनि व...
नारीका यी स्वभावले बिग्रन्छ घर परिवार
भनिन्छ कुनैपनि घरको सौभाग्य भनेको नारी हो । असल नारी घरमा छिन् भने त्यो घर स्वर्गसमान हुन्छ । तर, दुष्ट नारी भएको घर सँध...
फेसबुकमा सुरु भयो लगइन नोटिफिकेसन फिचर
सोसल नेटवर्किङ साइट फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूका लागि एक नयाँ फिचर लञ्च गरेको छ । फेसबुकमा सुरु भएको लगइन नोटिफिकेसन्...
राजेश पायलले भनेः धेरै रुन्ची नबन आस्था, अब तिमी ठूली भइसक्यौ !
गायिका आस्था राउत स्टेजमा प्रस्तुति दिँदा होस् या नयाँ गीत सार्वजनिक गर्दा नै किन नहोस्, चर्चामा आइहाल्छिन् । पछिल्लो सम...